Siyaasadda Dawooyinka 2.0 • Dawooyinka Inc.eu
Wax badan ayaa ka dhacay siyaasada Hague tan iyo doorashadii Golaha Wakiilada ee 17 Maarso. Natiijada lafteeda ayaa war wanaagsan u noqotay kuwa u ololeeya siyaasad daroogo oo ka duwan tii hore, maadaama xisbiyada kiristaanka ah ay lumiyeen kuraas isla markaana xisbiyada horumarka leh ay ku guuleysteen kuraas. Tani waxay dhalisay, iyo waxyaabo kale, in Wasiirka Grapperhaus (CDA) iyo Xoghayaha Gobolka Blokhuis (CU) weydiiyay in ay qaadan doonto go'aanka lagu dejinayo xeerarka ku saabsan NPS (mamnuucista walxaha) iyo ujeedka nitrous oxidemamnuucida ka reebida golaha wasiirada cusub, marka loo eego xaalada ilaaliyaha golaha iyo kharashaadka fulinta. Labada soo jeedinba, uma badna in xeerarka wax laga beddelay la soo saari doono ka hor 2022.
Guddiga joogtada ah ee Caddaaladda iyo Amniga ee Golaha Wakiiladu waxay kulmi doonaan Abriil 14, 2021 gaar ah in warqadan lagu daro ajandaha dooda guddiga ee ku saabsan siyaasada daroogada 2da Juun 2021. Inta lagu jiro dooda guddiga Siyaasada kafeega ayaa sidoo kale laga doodi doonaa iyo waraaqaha laga soo bilaabo 2018, 2019 iyo 2020 oo ay ka mid yihiin, Wasiir Bruins (oo shaqada ka fariistay bishii Maarso 2020) iyo Wasiir Van Rijn (oo shaqada ka fariistay bishii July 2020).
Isla maalintaas, guddiga joogtada ah ee VWS ee Golaha Wakiillada gaar ah in lagu dhawaaqo warqada ka socota Xoghayaha Arimaha Dibada Blokhuis ee 9 Marso 2021 ee ka hortaga daroogada oo muran ka taagan yahay. Ku dhawaaqida mawduucyada qaarkood ee muranka dhaliyay waxay ka hor istaageysaa golaha wasiirada inay 'xukumaan qabrigiisa'. Taas lafteeda ayaa ah war wanaagsan, maxaa yeelay imika golaha wasiirada ayaa gacmahoodu xor u yihiin inay siiyaan nuxurka siyaasada daroogada lafteeda, laakiin aqalku kuma waafaqsana arintan.
Sida muuqata ka hortagga daroogada waa mowduuc muran badan ka taagan yahay, laakiin cadaadisku maahan. Waxaan u arkaa inay aad uga walwalsan tahay in dood ku saabsan siyaasadda daroogada dhowaan lagu qaban doono Guddiga Caddaaladda iyo Amniga, halkii laga qaban lahaa Guddiga VWS. Taasi waa isbeddel aan in muddo ah arkayay. Doodda ku saabsan siyaasadda daroogada ayaa marba marka ka dambeysa waxay u wareegeysaa Wasaaradda Caafimaadka, Daryeelka iyo Isboortiga iyadoo loo beddelayo caddaaladda iyo amniga. Taasi maahan horumar wanaagsan.
Waxaa jira dhowr sababood oo doodda ku saabsan siyaasadda daroogada aysan uga mid ahayn Guddiga Cadaaladda iyo Amniga. Marka hore, Wasiirka Caafimaadka, Daryeelka iyo Isboortiga wuxuu mas'uul ka yahay Xeerka Opium, ma ahan Wasiirka Caddaaladda iyo Amniga. Marka labaad, Mudanayaasha ka tirsan Guddiga Caddaaladda iyo Amniga waxay tixgeliyaan dhibaatooyinka ku hareeraysan daroogada inta badan marka laga hadlayo macnaha sharciga dembiyada. Feejignaan yar ayaa la siiyaa ka hortagga iyo ilaalinta caafimaadka bulshada. Diirad-saaristaan ​​hal dhinac ah ee ku saabsan cabudhinta si fiican uma sheegayso, maxaa yeelay ciqaabta iyo mamnuucista keligood ma xallinayso dhibaatada daroogada ee adag. Siyaasadda daroogada ayaa mid kale dalbatay hab dheellitiran. Taasi waa sababta ay u fiicnaan lahayd haddii laga tilmaamo dhinacyo kala duwan inay tahay waqtigii si fiican looga fakari lahaa siyaasadda daroogada. Si kastaba ha noqotee, siyaasadda hadda jirta ma keenin hoos u dhac weyn oo ku yimid isticmaalka daroogada iyo dhibaatooyinka la xiriira.
Komishanka Gobolka soo jeedinta siyaasada daroogada Nederland
Tani waa waqtiga ugufiican ee lagu wargaliyo xogheyaha iyo dhinacyada kaladuwan ee siyaasada inta lagu gudajiro wadaxaajoodka ururada isbahaysiga cusub, khabiiro iyo isticmaaleyaasha, si looga fikiro siyaasad cusub oo daroogo oo khatar yar ku ah caafimaadka bulshada, xakamaynaysa kharashaadka fulinta daroogada, caddaalad u sameeya xorriyadda doorashada ee dadka oo aan ku ciyaarin dambi (abaabulan). Guddigan gobolka wuxuu sameyn karaa soo jeedin dib u habeyn lagu sameeyo siyaasada daroogada Nederland. Barta bilowgu waa in la ilaaliyo khataraha caafimaad ee daroogada sida ugu macquulsan loona dammaanad qaado caafimaadka, nabadgelyada iyo daryeelka bulshada guud ahaan intii suurtagal ah.
Ku billow siyaasad daroogo fiican oo Beter Beleid Foundation, siyaasad daroogo oo macquul ah (afb.)
Bilowgii sanadka 2020, wicitaan tan ayaa horey loogu sameeyey Muujin siyaasad daroogo oo macquul ah. Hindise kale oo ku baaqaya tan ayaa ah codsi ee Beter Beleid Foundation. Gaar ahaan hadda markay D66 ku guuleysatay intaas oo kursi, waxaad filan kartaa xisbigan inuu soo gudbiyo soo jeedinta magacaabista guddiga gobolka miiska wada hadalka, laakiin sidoo kale waa muhiim haddii xisbiyada kale ee siyaasadeed ay taageeraan soo jeedintan.
Siyaasiyiintu waxay sifiican u isticmaali karaan mudada soo socota si ay sifiican dib ugufiiriyaan siyaasada daroogada iyo inay raadiyaan xalalka halista laxiriirta isticmaalka daroogada iyo dhibaatooyinka laxiriira ka ganacsiga (sharci darada) daroogada, halkii laga sii wadi lahaa dagaalka macno darada ah ee daroogada.
go'aan qaadashosiyaasadda daroogadaKHLANederlandsiyaasadda
Thailand waxay qabanqaabineysaa munaasabadda ugu horreysa ee gaja adduunka oo ah bisha Febraayo 2020. Laakiin maahan xaflad.
Waa la xaqiijiyay. Thailand waa tii ugu horreysay ee abaabusha Bandhigga Ganja ee Adduunka sannadka 2020. Iyada oo aad iyo aad u badan…
Bilyan garaam oo xashiishad ah oo la kaydiyey iyadoon la iibin
BNN Bloomberg ayaa toddobaadkan shaacisay in hal bilyan oo garaam oo dheriga sharciga ah ee Kanada aan lagu iibin ...
Waxaa qoray mr Kaj Hollemans, KH Legal Advice (@ KHLA2014) Toddobaadkii hore, go'aanka qabyada ah ee ka kooban xeerarka on